Ogaden News Agency (ONA) – Steve Bannon Ku Makhraati Furay Gudiga Aqalka Congress Maraykanka.
Steve Bannon Ku Makhraati Furay Gudiga Aqalka Congress Maraykanka.
Wargeyska New York Times ayaa ku waramay in madaxii hore ee istiraatijiyadda Madaxweyne Trump, Steve Bannon, lagu amray in uu ka hor marag furo guddi aqalka Congress-ka ee baadhaya eedaha ah in Ruushku faro galiyay doorashadii madaxtooyada ee Maraykanka iyo in kale.
Af-hayeen u hadlay Robert Mueller, oo ah ninka wada baadhitaankaas ayaa ka gaabsaday in uu warkaa wax ka yidhaahdo. Hadiise la xaqiijiyo waxay noqon doontaa markii ugu horaysay ee Mueller adeegsaday guddida Congress-ka si uu xog uga helo xubin ka mid ah kuwa ugu dhaw dhaw Trump.
Wariyeyaasha ayaa sheegay in ay arintaas astaan u tahay in baadhitaanka Mueller soo xoogaysanayo. Warkaa wargeysku baahiyey ayaa soo baxay iyadoo la ogsoonyahay in uu hore Bannon xog u siiyey gudida aqalka Congress-ka ka tirsan ee isla eedahaa baadhaya.
Trump iyo Bannon ayaa khilaafkoodu dibada u soo baxay bishan horaanteedii ka dib markii waraysi lagala yeeshay Bannon buuk fadeexadaynaya Trump iyo sida uu uga taliyo Aqalka Cad oo uu dhawaan qoray.